Spandex Latex bụ akwa ihe eji eme ihe nkiri latex, nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nke ọma. Ọ na - eweputa teknụzụ nano. Ọ nwere nnukwu agbanwe agbanwe na akụkụ anọ ọ bụla, ọ dịghị mfe ịgbawa, ọ naghị amịkọrọ mmiri, ma nwee ọrụ ọsụsọ nke egwuregwu na ahụike. Mmetụta mmetụta ya ...GỤKWUO »
Source emeputa Source center Mmeputa na ahia mwekota B2B Strong Nsukka, zuru ụwa ọnụ nkwado Cross-ókè-ala ọkọnọ, zuru ụwa ọnụ Mbupu (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX) Computer efere Ndinam, mbụ imewe, Computer ịcha bed, ngwaahịa mma nnyocha na nnyefe, ahịa ọrụ cen .. .GỤKWUO »
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa azụmaahịa na-ejikọ mmepe mmepe, imepụta ngwaahịa, mmepụta na ire ahịa. Ngwaahịa bụ isi na-eji nyocha onwe onye na mmepe nke akwa, dị ka spandex latex (elu mmanụ / enyo elu), na-eji akwa nylon kpara akpa, akwa ahụ bụ enviro ...GỤKWUO »
Post oge: Ọgọstụ-14-2020
1.About ụlọ ọrụ anyị ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa azụmaahịa na-ejikọ mmepe mmepe, imepụta ngwaahịa, mmepụta na ahịa. Isi ngwaahịa na-eji nnwere onwe nnyocha na mmepe nke akwa, dị ka spandex latex (mmanụ elu / mirror elu), na-eji w ...GỤKWUO »
Post oge: Apr-23-2020
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ntiwapụ nke coronaviruses ọhụrụ na China na ụwa niile, ụlọ ọrụ anyị nwere oke nchegbu banyere nke a. Dabere na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe anyị na mmepụta nke anụ ahụ na ụdị uwe dị iche iche, anyị emepela usoro mmepụta abụọ maka uwe nchekwa na-enweghị isi na nkpuchi. Anyị ...GỤKWUO »
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke ahụmahụ, anyị onwe anyị mepụtara ihe ọgụgụ isi kwalite version nke CAD efere Ndinam usoro. Ọ bụ a software maka uwe kọmputa efere Ndinam, nzuzo, na okirikiri nhọrọ ukwuu. Ọ bụ usoro CAD ọhụrụ na nke juputara na ya. Usoro a dị mma maka ...GỤKWUO »
Mgbe anyị gbasiri mbọ ike, ọnụọgụ ire ahịa anyị nke spandex latex tights a na-ebupụ na ahịa Europe na America agafeela US $ 1 nde. Nke a bụ ihe ọhụụ ọhụrụ na akụkọ ntolite ahịa anyị. Anyị ga-anọgide na-ebuli ma melite ngwaahịa anyị ka ngwaahịa anyị wee bụrụ ọfụma karịa. ...GỤKWUO »